Mushrooms | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ọdịiche dị n'etiti oriri na ụgha mushrooms, esi mara ọdịiche dị n'etiti ụfụfụ akpaetu si na mbụ mushrooms
A na-ewere mushrooms mmanụ aṅụ dị ka otu n'ime ihe ndị a ma ama na ndị na-agagharị agaric. N'ezie, na mpempe oyi ma ọ bụ pickled, ha nwere ike ịzụrụ ha ngwa ngwa na nnukwu ụlọ ahịa, mana ero ndị na-eto eto na-enweghị ụdị uto na okpukpo dị ka otu ohia ọhịa. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị ghọta nke ọma ihe ndị na-akpọ mushrooms na-anakọta na iri ha n'ejighị ndụ ha egwu.
Ụdị agarics mmanụ aṅụ na-adịghị na ya, enyemaka mbụ ma ọ bụrụ na ụbụrụ na-egbu egbu
Ngwurugwu mmanụ aṅụ na-amasị mmadụ nile. Ụdị ndị a kọwara na akwụkwọ na Intaneti nwere ihe dịka 22 n'ime ụdị ha, ọ bụ ezie na a na-ekwenyekarị na e nwere ụdị 34 nke agaric. Ndị a na-eto eto na-eto ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'afọ nile. Ha na eto n'osisi osisi, na-etolite n'ezinụlọ na stumps, karịsịa rere ure.
Ee - umu
A na-enweta aha ero ọcha ahụ n'oge ochie. Mgbe ahụ, ndị mmadụ na-anọkarị na-akpọrọ mushrooms. Ọkụ nke na-acha ọcha ọcha nọgidere na-adị ọcha mgbe ọchara ma ọ bụ ọgwụ ọkụ. Nke a bụ ihe kpatara aha a. Ọcha ọcha bụ nke dị na Boletus, ya mere aha nke abụọ na-acha ọcha bụ boletus. Ọ dị mkpa! Mgbe ichikota mushrooms, ọ dị mkpa iji ngwa ngwa malite ịhazi ha, ebe ọ bụ na ndị na-acha ọcha mushrooms anaghị eji ngwa ngwa ha bara uru.
Mkpali na-ekpo ọkụ ma na-agbanwe agbanwe nke mmiri ara ehi na-emepụta ọtụtụ nsogbu maka ndị nnabata na kichin, karịsịa mgbe ha na-akwadebe maka oyi. Achọrọ m iwepụ ihe ilu nke mmiri ara ehi na-egbu, ma n'otu oge ahụ na-ejide ike ha. N'agbanyeghị ihe ndị a na-emegiderịta onwe ha, ha ka na-ahụ ebe ha na-eri ọtụtụ efere.
Boletus Nri: nkọwa, ụdị, ọdịiche
Na oke osisi na agwakọta, ị nwere ike ịchọta ero, nke, ọtụtụ mgbe, na-etolite n'azụ akpa, ya mere aha - flyworm. Ị nwere ike izute ya site na mmalite nke okpomọkụ ruo na ngwụsị mgbụsị akwụkwọ. A na-ewere ụdị ya nile dị ka oriri, ma ha nwere ike ịghọ mgbagwoju anya na ụgha flywheel - parasitic. Nke a ga-abụ isiokwu anyị, ya bụ, otu esi amata ọdịiche dị iche iche nke na-egbu egbu na ma ọ ga-eri ma ọ bụ.
Ngwurugwu na-eto eto nke na-eto eto n'ụlọ
Ndị na-eme egwuregwu na-eri oge na-eri nri ọtụtụ mmadụ. Ha dị ụtọ, dị mfe ịkwadebe ma dị ọnụ ala: ị nwere ike ịzụta ha na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọ bụla. Mana ọ bụrụ na ị ka kpebiri ịgwọ onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya na-eme ka ị na-enwe obi ụtọ na gburugburu ebe obibi, ị ga-achọ ihe ọmụma na mgbalị.
Ịmụta ụzọ e si eto mushrooms
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọ ọkaibe n'ụlọ, ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị ajụjụ: gịnị ka ọ bụ na gịnị ka ị nwere maka ya? A sị ka e kwuwe, iji nye ezinụlọ gị nri abalị dị ụtọ, igbe ole na ole dị n'okpuru ala ma ọ bụ akwa ogige ga-ezu. Ma ọ bụrụ na ị kpebie ịhazi nnukwu mmepụta, ị ga-achọ ọ bụghị nanị nnukwu ụlọ ọrụ ndị nwere ike iche, ma ngwaọrụ, ígwè ọrụ, nnukwu ihe onwunwe na ụgwọ ọrụ, yana ihe ọmụma.
Nkọwa nke ụdị nke ndị isi ala
Okwu ahụ bụ "gruzd" na nsụgharị sitere na Slavonic pụtara "kpokọta". Ka a sịkwa ihe mere ha ji nweta aha ahụ. N'oge ochie na Russia, ndị na-egwupụta ụzụ na-achịkọta ụgbọala ha na salụ. Ụdị mumps niile na-ejikọta ihe ndị a na-ahụkarị: a na-ahụ ihe mgbagwoju anya na okpu ahụ ma ọdịdị na-agbanwe na uto nke ero ahụ - nke mbụ ọ bụ convex wee sụchaa nku ya.
Ụzọ nke owuwe ihe ubi maka oyi n'oge obibi
Maslata - mushrooms ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị na-egwupụta ihe na ero na ndị Fans nke ngwaahịa a. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na e nwere ọtụtụ ntụziaka na ụzọ maka nkwadebe ha. Onye ọ bụla nnabata nwere ike ịkwa isi nke, uzommeputa otu. E nwekwara ọtụtụ ụzọ isi nweta mmanụ ọka maka oyi. Mmiri na-ekpochapu Ụzọ kachasị mma maka nchịkọta ihe ubi maka oyi bụ ihicha, nke na-adịghị emetụta ihe oriri na ahụ ụtọ na ngwaahịa.
Nkọwa nke ero ero na foto
Ruo ọtụtụ afọ, ndị mmadụ nọ na-achịkọta ezì ma hụ ha n'anya maka ọdịdị pụrụ iche nke ha na nkwadebe. Ndị ọkachamara na-eri ihe ndị ọkachamara na-ekwusi ike na ndị mushrooms ndị a dị nchebe kpamkpam, ọ bụ iji mechaa ha ma merie ha tupu ha esi nri. N'adịghị ka nkwupụta a, e nwere echiche banyere ihe ize ndụ na nsí nke onyinye ndị a dị na ọhịa.
Enwere ike iri nri mushrooms ara ehi: esi amata ọdịiche dị n'eziokwu site n'aka onye ụgha
Nri mushrooms bụ mushrooms ndị kachasị ewu ewu n'etiti gourmets. Osisi, nke nwere mmiri ara ehi, bụ ezigbo ebe a na-ahụ maka ndị na-egwupụta ọka. N'agbanyeghi na ha mara ndi mmadu, ndi Gordhia zoro anya na anya mmadu ma zoo n'okpuru osisi di nso stumps na hillocks di iche iche. Ya mere, na-achọgharị ụdị ụdị mycobionts a, ọ ka mma ijide gị na ị ga-achọpụta ebe niile ebe mushrooms na-eto eto.
Egwu svinushka a na-ewu ewu na-ewu ewu ma mara nke ọma na ndị na-amị ọka. Ọ dị anya ogologo oge tupu ọka ndị ọzọ ma na-emepụta nke ọma ruo mgbe ụbịa mgbụsị akwụkwọ. Ị ma? Dị ka nkọwa si n'elu, svushka mushrooms yiri ntị ntị. A na - ahụ ihe yiri nke a na - eto eto. Ihe kpatara nke a bụ ụkwụ, nke a na-etinyeghị na etiti okpu nke ero ahụ, kama ọ bụ ebe a kwụsịrị.
Mycelium mmepụta nkà na ụzụ (mycelium): esi eto mycelium n'ụlọ
Maka oge mbụ anyị na-amụta ihe mycelium dị na klas usoro ndụ, mana ọtụtụ anaghị aghọta ihe mere o ji dị mkpa iji too ya na ihe eji ya eme. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na esi eto mycelium nke fungi, nkọwa gbasara ịmalite mycelium, na nke mbụ, anyị ga-eleba anya n'ihe ọ bụ. Kedu ihe bụ mycelium na ihe kpatara ya ji eto ya.
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti ndị ọzọ na stitch mushrooms?
Ọtụtụ mushrooms na-eri nri yiri ndị ahụ na-egbu egbu, ọ pụkwara isi ike ịmata ọdịiche dị ha na ọbụna onye na-egwupụta ihe ọkụkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị nwere ọtụtụ nha nhata na mpaghara ahụ, ha na-enwekarị mgbagwoju anya, na-anakọta n'otu nkata. Anyị ga-ekwu maka ọdịiche dị iche iche nke okwu ndị ọzọ na ederede n'isiokwu a. Morel nkịtị: nkọwa Morel (lat.
Ndị nnọchiteanya nke aspen nnụnụ na nkọwa
Aspen mushrooms - ụdị mushrooms nwere oriri na ụkwụ ukwu na nnukwu okpu. Ndị nnọchiteanya nke anụ ọhịa na-eto n'ọhịa Eurasia na North America. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị ụdị nke ero a bụ nsi, mmadụ ole na ole na-amata ọdịiche dị n'etiti ha. Ka anyị lee ụdị ụdị nke ụdị aspen na ụdị àgwà ha.
Atụmatụ na Atụmatụ maka pickling mushrooms
Ngwakọta mushrooms maka oyi n'oge obibi ... E nwere ihe ezughị ezu iji mee nke a. Na otu ncheta nke ihe oriri a na-adọrọ adọrọ, onye ọ bụla gọọmet na-asọba na mmiri. A sị ka e kwuwe, nri dị ụtọ dị otú a ga-akwado ya n'ụzọ zuru ezu ma gbanwee menu nke ememe ọ bụla.
Kedu ka ị ga - esi banye na boletus ụgha: ndepụta nke mushrooms inedible
A na-eji bọlbụ ma ọ bụ bolt eme ihe n'oge nri. Enwere oriri, oriri oriri na inedible mushrooms. Ezinụlọ a bụ mushrooms bụ otu n'ime ụdị ndị nnọchianya ndị na - eri nri - anụ ọcha. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu nlele si akwa, otú ị ga-esi amata ọdịiche dị iche iche dị iche iche na nsị anụ oriri, ụdị ụdị boleta.
Otu esi akpo oporo mushrooms: kwalite site n'usoro ntuziaka na foto
Ngwurugwu na-eto eto na-adọrọ mmasị ma na-adịghị ego ọnụ, nke a na-ahụkarị na shelves. Maka ndị chọrọ iji aka ha kwadebe ogwu anu oporo na ụdị mịrị amị maka nchekwa nchekwa oge, anyị ga-agwa gị otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi, nke mere na uto ha agaghị emechu gị ihu n'ọdịnihu. Ọ nwere ike ịkwanye nsị mushrooms? E nwere ntụziaka nzọụkwụ-site-nzọụkwụ na Intanet na esi ehicha mushrooms, na-acha ọcha mushrooms na ụdị mushrooms ndị ọzọ, ma enwere ntakịrị ihe ọmụma gbasara haịl mushrooms, ebe ọ bụ na ngwaahịa a adịghị ewu ewu maka ihicha.
Nri mushrooms maka oyi n'ụlọ
Nkera nke abụọ nke oge okpomọkụ - oge eruola iji mechie ebuka maka oyi. Ọ bụ oge owuwe ihe ubi, usoro ma chekwaa akwụkwọ nri. A na-ezigara mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi ndị ọzọ, ma e wezụga maka Mkpọ, na friza - iji chebe vitamin. Mana enwere uzo ozo di iche iche nke otutu ndi nnabata na-eme, ya bu nzacha nke mushrooms anakọtara ma obu zuta maka oge oyi, ma a ghaghi ichebara usoro a anya.
Uzo esi eme ka ha ghara ighota ogwu anu ohia ndi ozo: raw, sie, e ghere eghe
A pụrụ ịzụta mushrooms a na-esi nsị taa taa na ahịa na ụlọ ahịa. Ma ụlọ griza ụlọ ka dị mkpa. Ndị mmadụ na-ahọrọ ịgha mkpụrụ maka oyi, n'ihi na nke a abụghị ihe dị mfe ma ọ dịghị onye nwere ike inye gị nkwa na ịzụta ezigbo ngwaahịa na ụlọ ahịa. Ọ bụ ya mere anyị ji kpebie ikwu okwu banyere snoo na mushrooms maka oyi ma gwa anyị ọtụtụ ntụziaka ndị a ma ama.